Umva we-X-Rays (Spine X-Rays)
Oogqirha basebenzise i-x-ray ngaphezulu kwenkulungwane ukubona ngaphakathi emzimbeni ukuze bafumane iingxaki ezahlukeneyo, kubandakanya umhlaza, ukwaphuka kunye nenyumoniya. Ngexesha lovavanyo, uhlala ume phambi kweplate yokufota ngelixa umatshini ethumela i-x-reyi, uhlobo lwemitha, ngomzimba wakho. Ekuqaleni, ifoto yezakhiwo zangaphakathi yaveliswa kwifilimu; Kule mihla, umfanekiso owenziwe yi-x-ray uya ngqo kwikhompyuter. Izakhiwo ezixineneyo, ezinje ngethambo, zibonakala zimhlophe kwiifilimu ze-x-reyi ngenxa yokuba zifumana imitha ye-x-ray kwaye ziyibhloka ekufikeleleni kwipleyiti. Amalungu omzimba angenanto, anje ngemiphunga, abonakala emnyama ngenxa yokuba ii-x-ray zidlula kuwo.
Oogqirha basebenzisa i-x-ray emva ukuvavanya i-vertebrae kumqolo wokuqhekeka, isifo samathambo, okanye iziphene zomqolo ezinje nge-scoliosis, kunye neempawu zosulelo okanye umhlaza. I-X-reyi ingathathwa ngokwahlukeneyo kwiindawo ezintathu zomqolo: umnqonqo wesibeleko (intamo), umqolo wesisu (umqolo ophakathi), kunye ne-lumbar spine (ezantsi ngasemva). Ngamaxesha athile, oogqirha x-ray i-pelvis ukunceda ukufumanisa unobangela weentlungu zangasemva.
Kuya kufuneka ususe zonke iimpahla, iingubo zangaphantsi, kunye nezacholo kumzimba wakho ongaphezulu. Unokucelwa ukuba unxibe ilokhwe yasesibhedlele.
Unokuma okanye ulale phantsi ngelixa igcisa lithatha i-x-ray. Ukubeka endaweni yeplate yefoto (ejongeka njengebhodi enkulu) ukuze ufumane imifanekiso ecacileyo. Umbono wangaphambili kunye nembono esecaleni zihlala zithathwa.
Nge-x-ray yomlomo wesibeleko, ugqirha ukuxelela ukuba uvule umlomo wakho ngokubanzi ngangokunokwenzeka ngaphambi kokuba uthathe eminye yemifanekiso; oku kwenzelwa ukunqanda ukuba amazinyo akho abambe umbono wamathambo phezulu komqolo wakho.
Itekhnoloji iyalishiya igumbi okanye ime ngasemva kwescreen ngelixa ilawula i-x-ray camera. Ukuthintela umfanekiso ongacacanga, ukuxelela ukuba uhlale uzolile kangangoko kunokwenzeka, kubandakanya nokubamba umphefumlo wakho, ngaphambi kokuba uthathe umfanekiso ngamnye.
Isixa semitha esivela kuvavanyo lwe-x-ray sincinci kakhulu ukuba sinokudala ingozi. Nangona kunjalo, ukuba ukhulelwe, thetha nogqirha wakho. Imitha inokuba yingozi kwimveku engekazalwa.
ukuxubha utywala kwi-herpes
Nangona imifanekiso yedijithali ihlala ifumaneka kwangoko, kungathatha ixesha elongezelelekileyo ukuba ugqirha ayijonge. Uya kufumana iziphumo kamva ngemini.
Iziphumo ezibi xanax umsindo
I-butalbital / acetaminophen / caffeine
Uluhlu lwesifo se-crohn
ndicula ndiphi isitshixo
Ngaba i-augmentin inokutyunyuzwa
utshise ividiyo kwi-dvd windows 10